China Chinyakare Chinese Mishonga Yezvinhu Herba Cistanches Kugadzira uye Fekitori | Bestop
Chinyakare Chinese Mishonga Yezvinhu Herba Cistanches
Chinese zita: da yun
Chirungu Zita: herba cistanches
ChiLatin Zita: Cistanche salsa (CAMey.) G.Bec
Shandisa Chikamu: Midzi
Kunonatsiridza itsvo yang, kubatsira kunokosha neropa, uye kutapura ura
Dayun, ane zita resainzi ndiCistanche deserticola, anonzi goblin kana yegoridhe bhudhi kupfura nemaChinese varapi varapi. Iyo yakakosha zvakanyanya mishonga yemakwenzi yeChinese, uye inozivikanwa se "ginseng yerenje". Yakave ichitaridzirwa sepfuma yeterevhisi yedare nenyika dzekumadokero munhoroondo, ichinyanya kugoverwa muXinjiang uye Inner Mongolia.
Cistanche deserticola chirimwa chinopararira chinodzika pamudzi weHaloxylon ammodendron, ine zvakaderera zvinodiwa pavhu nemvura. Mumakore achangopfuura, budiriro yakaitwa mukudyara Cistanche deserticola mukuteedzera sango pamhenderekedzo yegungwa ine jecha muCangzhou, Hebei Province. Hunhu hweCistanche deserticola inogadzirwa yakanyanya kukwirira nekuti ivhu mhando iri nani kupfuura iro munzvimbo yemurenje. Gansu, Qinghai, Xinjiang, Inner Mongolia, Russia, Mongolia neIran.
Kunonatsiridza itsvo yang, kubatsira kunokosha neropa, uye kutapura ura. Kushanda: Mushonga, Hutano Kuchengeta chikafu, Waini, nezvimwe.
Kusagara kuenda kumwedzi, amenorrhea, kushaya mbereko, kushaya simba, spermatorrhea, kudonha weti, hoarse aphonia, kuzvimbirwa, manyoka nekuda kwekushomeka kwechando, uye kurwara kwakawanda.
1.Zvakanakisa kushandisa Angelica sinensis nemafuta kusimbisa ropa uye kunyorova kuoma, kuwedzera mvura uye kuenda kuchikepe, uye ine simba rakasimba re laxative. Iyo inokodzera kuunganidzwa kwevakweguru vasina simba yang uye isina kukwana essence neropa. 2, naMorinda officinalis, inowedzera simba rekudziya itsvo nekusimbisa yang, zvese zviri zviviri zvinokodzera kuomesa kuoma, uye zvine simba rakanaka rekuzadza moto pasina mvura yakaoma. Neye itsvo yang kushomeka, kushaya simba uye spermatorrhea, kutonhora chiuno nemabvi, mapfumo asina kusimba uye mhasuru, nezvimwe, zvinowanzo sarudzwa; Iyo zvakare ine basa rekutsigira yang uye kutandadza ura. Kana ichishandiswa senile qi kutadza uye kupatira nekuda kwekushomeka kweyang, iyo muyero weCistanche deserticola inogona kuwedzerwa zvakafanira, uye zvirinani kurapa mhedzisiro kunogona kuwanikwa. 3. Kana yakabatanidzwa neAstragalus membranaceus, Cistanche deserticola inogona kutakura qi-inosimbisa simba reAstragalus membranaceus kuenda kuitsvo, uye ine simba rekutsvenesa itsvo uye qi nekubatsira itsvo yang. 4, ine Achyranthes bidentata, kune maviri akasarudzika makwikwi. Kutanga, vanowirirana uye vanofanirwa kuve pairi kusimudzira simba rekudziisa itsvo nekusimbisa yang; Kechipiri, Achyranthes bidentata inogona kuendesa mushonga pasi kana wakanaka pakufamba. 5. Nemuton, inogona kusimbisa yin uye kubatsirwa essence. Iyo mishonga miviri, imwe yang uye imwe yin, inoganhurana, inosimudzira uye inowirirana, uye ine basa rekuenzanisa yin uye yang yeitsvo.
Dayun rakakamurwa kuva chitubu dayun nematsutso dayun zvinoenderana nenguva yekunhonga yakasiyana. Zuva remasikati rinotanga kuchera muna Kubvumbi gore rega rega, rinotendeuka muzuva rinopisa rezhizha, uye rinorongedza uye rinotakura nyama uye madzinde mushure mekuoma; Nguva yekuchera Dayun iri kukura mumatsutso kubva munaGunyana kusvika Gumiguru. Kukura kwaro pachako kudiki pane iro raDayun muchirimo, uye hunyoro hwaro hwakafanana neya Dayun muchirimo. Nekudaro, nekuda kwezuva risina kusimba, tembiricha yakaderera uye nguva pfupi yezuva mukupera kwematsutso uye kutanga kwechando, zvinonetsa kuvimbisa mhando uye kutaurwa.
(1) kuomesa. Pararira mujecha masikati, unganidza mirwi uye uifukidze husiku, kuitira kudzivirira kutonhodza nekuda kwemusiyano mukuru wekupisa pakati pehusiku neusiku. Cistanche deserticola ine mavara akanaka uye mhando yepamusoro mushure mekuomeswa nezuva.
(2) Kuita munyu. Marinate Cistanche deserticola mumunyu kwe1 ~ 3 makore, kana kuchera gomba re50 × 50 × 120 cm muvhu ndokuiisa muhomwe yepurasitiki ine saizi imwechete uye isina kubuda mvura. Kana tembiricha ikadzika kusvika pa0 ℃, isa Cistanche deserticola muhombodo, shandisa ivhu remunzvimbo risina kugadziriswa remunyu kugadzirira 40% brine yekuisa munyu, woiburitsa woomesa munaKurume wegore rechipiri, nekudaro uchiva Salty Dayun.
(3) imba yepamusoro. Chera gomba pazasi pemutsara wakakomba wevhu rakagwamba nechando, viga nyowani Cistanche deserticola munguva inotonhora, woiburitsa woomesa mugore rechipiri.
Pashure: Wholesale YeClove
Zvadaro: Mbeu YeAsiaatic Plantain Chinese Herbal Mishonga Wholesale
Chinyakare Chinese Mushonga Aplotaxis Auriculata
Wholesale YeRhizoma Cyperi
Hutano hweVarume Kuchengeta Cynomorium Songaricum
Tsika dzeChinese Herbal Mushonga Cinnabar
Tsika Chinese Mushonga Wepasi